Isihlomelo sebhedi enye ephangaleleyo, eShawford, eWinchester
Entsha iqulathe isihlomelo esinemigangatho emi-2 enendawo yokupaka! Ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neWinchester (iikhilomitha ezi-3) kunye nesikhululo sikaloliwe sase-Shawford esikuhambo lwemizuzu eli-10 uhamba ngeShawford Down entle. I-M3 nayo ikwimizuzu emi-3 kuphela.
Kukho ii-pubs ezimbini ezinkulu kwindawo nganye akukho ngaphezu kwemizuzu eyi-15 ukuhamba.
Isihlomelo sigqitywe kakuhle, sixhotyiswe kakuhle kwaye sine-WiFi kunye ne-TV NGOKU (SKY) ukuze uhlale uqhagamshelwe.
Indawo yethu ingafanela izibini okanye iindwendwe zeshishini.
Igumbi lokulala eli-1 elibanzi elinegumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elingaphezulu kwegaraji yethu. Le ndawo inomnyango wayo wabucala. Isihlomelo sanda kwakhiwa kwaye siqeshwe kakuhle kakhulu. Kukho nendawo eyaneleyo yokupaka imoto enye kwindlela yethu yokuqhuba.
IShawford yilali ethandekayo kumda wesixeko esiyimbali saseWinchester. IWinchester inokufikelelwa nokuba ngeenyawo (iyure), ngololiwe (imizuzu emi-5) okanye ngemoto (iikhilomitha ezi-3).
Kukho ii-pubs ezintle ezimbalwa kumgama wokuhamba kunye nelizwe elihle elikwiminyango yethu (Shawford Down kunye noMlambo i-Itchen)
Umtsalane wasekuhlaleni/ Izinto eziluncedo:
Ivenkile yendawo - 0.7 miles
Ivenkile enkulu - 2.5 miles
I-Marwell Zoo - iikhilomitha ezi-5
Southampton Docks - 10 miles
Isikhululo seenqwelomoya saseSouthampton - iimayile ezi-6
I-Paultons Park - iikhilomitha ezili-13
Ihlathi elitsha - iikhilomitha ezili-14
IBM Hursley - 4 miles
Sihlala kwindlu ephambili kwaye siya kufumaneka ukuba siyafuneka (ukuba akusoloko kumntu ngoko ngokuqinisekileyo kwifowuni). Sibonelele ngefolda kwiSihlomelo ekufuneka ngethemba ukukunika lonke ulwazi oludingayo malunga nepropati kunye nolwazi oluluncedo malunga neendawo zasekhaya kunye nezingqongileyo.
Sihlala kwindlu ephambili kwaye siya kufumaneka ukuba siyafuneka (ukuba akusoloko kumntu ngoko ngokuqinisekileyo kwifowuni). Sibonelele ngefolda kwiSihlomelo ekufuneka ngethemba uk…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Shawford